यामे युकाना क्यारेक्टर प्रोफाइल - क्र्याडल दृश्य
एक टिप्पणी छोड Yame Yukana चरित्र प्रोफाइलमा
Yame Yukana in Hajimete no Gal is one of the main characters from the Anime. She is also seen sometimes as the antagonist to the main character जुनिची हसबाजो पछि उनको प्रेम रुचि बन्छ। यो पोस्टले उनको जीवन, क्यारेक्टर, उपस्थिति, र थप विवरण गर्नेछ। निस्सन्देह उनी शृङ्खलाबाट उत्कृष्ट पात्र हुन्, MC भन्दा धेरै राम्रो जुनिची, र राम्रो कारणको लागि। यस लेखमा, हामी किन व्याख्या गर्नेछौं।
सिंहावलोकन - यामे युकाना
Let’s start off with the obvious, Yukana is one ofakind and an amazing एनिमे वाइफु to start with. We first meet Yukana in the first episode, when she is introduced to us when she catches Junichi readingaporn magazine in class. As you’d expect her reaction is not that of someone who is very impressed and she scolds जुनिची उसलाई "घृणित" भनिन्छ।
यसले मूलतया तिनीहरूको सम्बन्धको लागि सुरूवात ढाँचा सेट गर्दछ, र यो कसरी दुई पहिलो भेट हुन्छ। पछि मा Hajimete no Gal Yukana Yame meets again when जुनिची asks her out.
Yame को बारेमा कुरा गर्न को लागी पहिलो कुरा उनको उपस्थिति हुनेछ, जुन धेरै अचम्मको छ। याम औसत उचाइको वरिपरि छ, यद्यपि कहिलेकाहीँ उनी केही दृश्यहरूमा जुनिची भन्दा अग्लो देखिन्छिन्। जुनिची is around average height so they aren’t too different in height. Yame has blonde hair which has dyed pink strips in it. Sometimes the streaks aren’t visible but most of the time you can see them. Hajimete no Gal’s version of Yukana Yame may bealittle different from the Manga, but this is no problem.
उनको फिजिक विशेष गरी शो को केहि दृश्यहरु जस्तै जब उनि समुद्र तट मा यात्रा को समयमा धेरै उल्लेखनीय छ। यामको ठूलो बस्ट र सामान्य फिगरले फ्यानहरूलाई यो फ्यान सेवा प्रकार र माया गरिरहन्छ harem anime.
यामको व्यक्तित्व भावनाहरूको मिश्रण हो, जसमध्ये धेरैले आफूलाई यौनिक रूपमा व्यभिचारी भएको देखाउँछन् तर अझै पनि आफूमा सुरक्षित र विश्वस्त छन्।
उनी स्मार्ट पनि छिन् र कसैले उनलाई धोका दिन, छल गर्न वा झुटो बोल्न खोज्दा पनि बुझ्छिन्।
थप्नको लागि अर्को कुरा यो हो कि उनी एकदम इमान्दार छिन् र रोन्को उनको सबैभन्दा मिल्ने साथी जस्ता श्रृंखलाका केही पात्रहरू जस्तै मानिसहरूलाई हेरफेर गर्न झूट बोल्दैनन्।
यामको चरित्रको मुख्य पक्ष जुन चम्किन्छ त्यो यो हो कि उनी फ्लर्टी छिन्। उनी आफ्नो यो पक्ष प्रायः व्यक्त गर्छिन् जुनिची र कहिलेकाहीँ शृङ्खलाका अन्य पात्रहरू तर अरू केही पात्रहरूलाई पनि। साथै यो याम पनि धेरै दयालु र हेरचाह गर्ने छ जब उनी हुनु पर्छ।
यामे युकानाको इतिहास मङ्गामा सुरु हुन्छ जब हामी देख्छौं कि उनी त्यही विद्यालयको विद्यार्थी थिइन्। जुनिची पनि उपस्थित हुन्छन्। यद्यपि, विपरीत जुनिची, Yame लगभग तुरुन्तै लोकप्रिय र सबैको लागि आकर्षक छ। यसले पहिलो एपिसोडमा दृश्य सेट अप गर्दछ किनभने मैले यो देखाउँदै गर्दा योम कति लोकप्रिय र प्यारा छ भनेर स्थापित गरें। जुनिची स्कूलमा एक हारेको र "कोही" होइन, उसका साथीहरू वांछनीय भन्दा कम छन् र एपिसोडको सुरुमा मात्र पागलको रूपमा देखिएका छन्, एकलाई धन्यवाद बिना। जुनिचीको साथीहरू जो मूलतः एक शाब्दिक पेडोफाइल हो।
जुनिची र नेने कोबायाकावाबाट उत्पीडित हुन्छन्
श्रृंखला भर, Yukana र जुनिचीको सम्बन्धको परीक्षण गरिन्छ, र बारम्बार यामले देखाउँछ कि उनी उनीहरूलाई गम्भीर हुन चाहन्छिन्। वास्तवमा, उनी रोन्को, यामको सबैभन्दा मिल्ने साथी र भेट्दा पनि रिस उठ्छिन् जुनिची सँगै चुम्बन गर्न को लागी। यदि उसलाई वास्ता छैन भने उनी यस बारे रोएनन्। यो धेरै सरल छ, र तपाईंले यो देख्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले सुरु गरेको सम्बन्धको अर्थ उसको लागि मात्र भन्दा बढी हो जुनिची उनीसँग खेल्नको लागि खेलौना हुनु, वा मजाक गर्न पनि।
एनिमको अन्त्यमा, यमेले आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग छोडेर जान लागे पनि, उनी मानेनन्, र युकाना र जुनिची सँगै अन्त्य। खुशीको अन्त्य हामी सबैले आशा गरेका थियौं र आशा गरेका थियौं र यो पक्कै पनि एनिमको सबैभन्दा राम्रो भाग हो, यद्यपि समुद्र तट एपिसोड हेर्नको लागि धेरै राम्रो थियो।
यामको क्यारेक्टर चाप एकदमै चाखलाग्दो छ किनभने त्यहाँ उनको क्यारेक्टरमा ठूलो परिवर्तन छैन, र त्यसैले, क्यारेक्टर आर्क त्यो देखिँदैन। सबैभन्दा ठूलो चाप भएको व्यक्ति हुनेछ जुनिची मेरो विचारमा यामले भन्दा उसले आफूलाई धेरै परिवर्तन गर्छ।
युकानाको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि उनको चरित्र धेरै परिवर्तन गर्दैन। तर त्यो होइन किनभने यो आवश्यक छैन वा हुनुपर्ने छैन, मलाई लाग्छ कि यो केवल किनभने यामसँग उनको चरित्र परिवर्तन गर्ने कुनै कारण छैन किनभने उनी कसैको लागि कस्तो छ भनेर परिवर्तन गर्दैनन्।
उनी पहिलो एपिसोडमा उही व्यक्तित्वको साथ सुरु गर्छिन् जुन उनले अन्तिममा गर्छिन्। उनी परिवर्तन हुँदैनन्।
यो उनको चरित्रको एक प्रशंसनीय पक्ष हुन सक्छ किनभने यसले एपिसोडका अन्य क्यारेक्टरहरू भन्दा फरक नक्कली इन्स्ट गर्न सक्छ।
Hajimete no Gal मा चरित्रको महत्व
एनिममा यामको ठूलो महत्त्व छ किनकि उनी मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हुन्। उदाहरणका लागि Nene Fujinoki, Yui Kashi, र Ayumi Kamisaka जस्ता अन्य उल्लेखनीय पात्रहरू। यी मध्ये केही पात्रहरूले विपरीत लिंगसँग उनको सफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयासमा यमलाई प्रतिलिपि गर्ने प्रयास पनि गर्छन्।
नेनेले आफ्नो चरित्रलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्छ किनभने उनी सोच्छन् जुनिची उनीतिर आकर्षित हुनेछन्, यद्यपि यसले वास्तवमै उसले चाहेको तरिकाले मद्दत गर्दैन किनकि उनी आकर्षित हुन्छन्, मानौं, अन्य अनावश्यक ध्यान।
चिका कुडो - चरित्र प्रोफाइल
अघिल्लो प्रविष्टि Dispare को चित्रण गर्ने सही तरीका - टाइटनमा आक्रमण
अर्को प्रविष्टि हाजिमेटे नो गल सिजन २ मे तपाईले सोचे भन्दा नजिक छ